PacketZoom's Mobile Expresslane CDN Yakabatana neAmazon Cloudfront | Martech Zone
Chipiri, February 6, 2018 Chitatu, Kukadzi 7, 2018 Douglas Karr
PacketZoom, kambani inovandudza nhare yekushandisa nhare kuburikidza ne-in-app nharembozha network network, yakazivisa kudyidzana ne Amazon CloudFront kusanganisira CloudFront muPacketZoom's Mobile Expresslane sevhisi. Mhinduro yakasungwa iyi inopa vanogadzira nharembozha yekutanga uye chete nhare mbozha kune avo ese network yekuita zvinodiwa.
Iyo yekutanga yekutanga-in-imwe nharembozha inotarisa zvese zvido zvekuita zve mobile apps - kuyera, yekupedzisira-mamaira mashandiro, uye epakati-mamaira mashandiro. Pfungwa dzebasa dzinosanganisira:
PacketZoom's Mobile Expresslane inomhanyisa mobile apps kusvika kusvika 3x uye inonunura kusvika ku90% yeneti disconnects yevashandisi veapps vanosanganisira Glu, Sephora, Photofy, Upwork nevamwe.
Nokubatana neCloudFront's Webhu CDN, PacketZoom neAmazon vanova vekutanga kupa mhinduro yekupedzisira-kumagumo nharembozha yenhare.
Pamwe chete nePacketZoom yekupedzisira nhare yekufambisa, vatengi vanoona yakanakisa nhare mbozha yekuendesa mhinduro.
PacketZoom vatengi avo vatove kuburitsa Amazon CloudFront munyika dzakasiyana vanosanganisira Glu Mobile, Upwork, Photofy (US), Perfect Corp (Asia), uye Belcorp (Latin America).
PacketZoom ndiye mutungamiri mu mobile app yekumhanyisa nzvimbo neayo Mobile Expresslane tekinoroji, iyo inomhanyisa mafoni maapplication kusvika kusvika ku3x uye inonunura kusvika ku90% yeinetwork inodonhedza ye mobile app vaparidzi vanosanganisira Glu, Sephora, Photofy, Upwork nevamwe. PacketZoom inovandudza ruzivo rwevashandisi pamaapplication efoni nekubvisa mashandiro emigwagwa mufoni yekupedzisira mamaira. Yayo nhare mbozha inopa yakakwana, yekupedzisira-kumagumo chigadzirwa suite yeMobile App Performance Management & Optimization (APMO).
CloudFront yeWebhu CDN yeAmazon ine chikamu chikuru chemusika pakati pevashandisi vekushandisa nhare. Iyo inonyatso chengetedza zvemukati nekukwiridzira kuendesa pakati yepakati mamaira. Pamwe chete nePacketZoom yekupedzisira nhare yekufambisa, vatengi vanoona yakanakisa nhare mbozha yekuendesa mhinduro.
Isu tinofara kupa yakanakisa yepasirese nyika: Amazon CloudFront - inonyanya kuzivikanwa Webhu CDN pakati pevanogadzira nhare - pamwe nePacketZoom Mobile Expresslane - inotungamira nharembozha yekuwedzera mhinduro. Chave chiri chigadzirwa chechisikigo shanduko kwatiri, nekuti vazhinji vevatengi vedu vatove kushandisa CloudFront. Shlomi Gian, PacketZoom CEO
PacketZoom inotsanangudza mashandiro enhare kuburikidza ne-in-app network network. Yakagadzirirwa yakanangana neyekuzvarwa nhare mbozha, PacketZoom's mobile platform inopa simba kune vanogadzira maapplication emafoni kuti vagadzirise mashandiro eapp mobile mune chaiyo-nguva. PacketZoom inovandudza ruzivo rwevashandisi pamaapplication efoni nekubvisa mashandiro emigwagwa mufoni yekupedzisira mamaira, ichimhanyisa kurodha kumhanyisa kusvika kusvika ku3x, kununura kusvika ku90% yemasangano kubva kuTCP madonhwe ekubatanidza uye kudzikisa mutengo weCDN. Kuti uwane rumwe ruzivo shanya PacketZoom
Tags: amazon makore epamberibelcorpCdnmakore emberiglu mobilepacketzoomyakakwana corpphotofykuvandudza
Akaundi-Yakavakirwa Kutengesa Strategic ndeye Ramangwana, uye Groove iri Pano Izvo